Zendaya နဲ့ Jacob Elordi တို့ချစ်သူတွေဖြစ်နေကြပြီလား? – Trend.com.mm
Zendaya နဲ့ Jacob Elordi တို့ချစ်သူတွေဖြစ်နေကြပြီလား?
Posted on October 21, 2019 by Noel
အခုရက်ပိုင်းအတွင်း နာမည်ကျော်သရုပ်ဆောင်တွေဖြစ်ကြတဲ့ မင်းသမီး Zendaya နဲ့ မင်းသား Jacob Elordi တို့ ချစ်သူတွေဖြစ်နေကြပြီဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။ဒိတ်သတင်းတွေလည်းပျံ့နှံ့နေတဲ့ကြားမှာပဲ မကြာသေးခင်က သူတို့နှစ်ယောက်ရုပ်ရှင်အတူသွားကြည့်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကြောင့်ပရိသတ်တွေဟာ သူတို့ချစ်သူတွေဖြစ်နေကြပြီလို့ ပိုပြီးထင်ကြေးပေးလာကြပါတယ်။
သြဂုတ်လ အစပိုင်းတုန်းက သူတို့နှစ်ယောက် ဂရိမှာအတူရှိနေတဲ့ပုံကို ပရိသတ်တစ်ယောက်က အင်စတာဂရမ်မှာစတင်ခဲ့ပြီး အဲ့ဒီကစလို့ ဒိတ်သတင်းထွက်လာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။
Zendaya ဟာ Spider Man မင်းသား Tom Holland နဲ့ ဒိတ်သတင်းကောလဟာလထွက်ဖူးပေမဲ့ နောက်ပိုင်းမှာ Tom မှာချစ်သူရှိနေကြောင်းမီဒီယာတွေကဖော်ပြခဲ့ကြပါတယ်။မင်းသား Jacob ကလည်း “The Kissing Booth” မှာ တွဲဖက်သရုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ မင်းသမီး Joey King နဲ့ ချစ်သူတွေဖြစ်ခဲ့ဖူးပြီး အများအားကျရတဲ့စုံတွဲလေးဖြစ်ခဲ့ဖူးပါတယ်။
အခုလက်ရှိမှာတော့ Zendaya နဲ့ Jacob တို့ကို ချစ်သူတွေအဖြစ်ပရိသတ်တွေက ထင်မြင်ယူဆနေကြပါပြီ။သူတို့နှစ်ယောက်ဟာ Euphoria ဆိုတဲ့စီးရီးမှာတွဲဖက်သရုပ်ဆောင်နေကြတာဖြစ်တဲ့အတွက် သူငယ်ချင်းတွေလိုပဲ ရင်းနှီးမှုရှိတာလား၊ချစ်သူတွေဖြစ်ဖို့ သံယောဇဉ်တွေအစပျိုးနေပြီလားဆိုတာကိုတော့ ပရိသတ်တွေဆက်ပြီးစောင့်ကြည့်ရဦးမှာပါပဲ။